Super Mario na-agba ọsọ gafere nde 78, mana naanị 5% zụtara ya | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | Egwuregwu gam akporo, Noticias, Super Mario Run
O siri ike ikwu okwu banyere egwuregwu dị ukwuu dị ka otu n'ime otu kpakpando na-enwu gbaa nke egwuregwu vidio ụwa bụ, na ụlọ ọrụ amabeghị dabara aha ahụ nke ọma n'ahịa, nke mobile, nke nwere ihe di iche na nke ya. Unu niile maara, m na-ekwu maka Super Mario Run, egwuregwu Nintendo mbụ nke nwere obere ngụkọta nke ntụgharị na ndị mechara nweta ya.
Nintendo's Super Mario Run abụwo ebudatara ihe karịrị 78 nde ugboro. N'ime nde nbudata 78 nde ahụ, nde 40 mere na ụbọchị 4 mbụ mgbe ha ruru iOS App Store, ebe pasent ise nke ngụkọta mechara zụta ya maka euro 10, nke bụ 5 pasent. Figuresfọdụ onu ogugu enwere ugbua na-abaghị uru na Japan ụlọ ọrụ ntụrụndụ, na ndị ọzọ mgbe iji ya ọgazị na-etinye ọlaedo nsen; kama agbajiri i nwere ike ikwu.
Super Mario Run nọ na-ahapụ ọnọdụ na ndepụta kachasị elu nke egwuregwu na Storelọ Ahịa Ngwa nke iOS, mana a na-atụ anya ibuli isi ya mgbe ọ dabara na os kachasị arụ ọrụ na mbara ala. Mmadu aghaghi iju ajuju na ihe ndia abughi ihe bara uru nye Nintendo, ebe obu na enweghi ike ighota ya na ndi mmadu adighi nma na ntughari, na o nwebeghị mbipụta na Storelọ Ahịa Google.
Tatsumi Kimishima, Onye isi Nintendo, mere ka o doo anya na ntụgharị ọnụego agbadaala ala atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ gara aga. Olileanya dị elu maka egwuregwu egwuregwu mkpanaka ya na-esote, Ndị Na-ahụ Maka Ọkụ Ọkụ, nke kwesịrị na February 2 na gam akporo. N'akụkụ aka nke ọzọ, Ebugharịla Animal ịgafe ruo n'afọ ọzọ gbasara ego, nke nwere ike ịbụ rue Machị 2018 n'oge kachasị ọhụrụ.
Olileanya na oge ọzọ ị ga-eji a ewu ewu site na egwuregwu ya, ahapụla ya naanị maka OS, ebe ọ bụ na ugbu a gam akporo bụ onye nwere ọtụtụ ngwaọrụ, yana ọ bụ ezie na ụlọ ahịa egwuregwu gị enweghị pasent ka mma na ahịa karịa Storelọ Ahịa App, ọ nwere uru bara ụba na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ onye nwere ike igwu ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Super Mario Run ruru ihe nbudata nde 78, mana naanị 5% zụtara ya
Kalịnda DigiCal bụ ngwa nwere ọtụtụ atụmatụ adịghị na Kalịnda Google